ကျေးဇူးပြုပြီး အိမ်ပြောင်းပေးပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ကျေးဇူးပြုပြီး အိမ်ပြောင်းပေးပါ။
Posted by nigimi77 on Jun 23, 2011 in Think Tank | 28 comments
တစ်ယောက် အတွက်နဲ့အများက ဒီလို ဖြစ်နေရတာလား အများ အတွက်နဲ့ တစ်ယောက်က ဒီမှာ နေ နေရတာလား။
၁၀ မိနစ်နဲ့ ရောက်နိုင်တဲ့ ကိုက္ကိုင်း လမ်းဆုံကို ရွာရိုးကိုးပတ် ဒီလို ပတ်ပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ သွားလာနေရပါတယ်။
လမ်းဆုံက Free way မှာ စည်ပင်ရဲ့အမှိုက်ပုံးကြီးတွေ၊ မော်တော်ပီကယ်တွေရဲ့ကားတွေက အပိုင်စားယူထားပါတယ်။
ကြွက်မနိုင် ကျီမီးနဲ့ ရှို့ လိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခ ကို ဒီတိုင်းကြည့်မနေပဲ အိမ်ပြောင်းပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
အတည် ပြောတာပါ။ ဆဲချင်တဲ့လူတွေ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အာလိုက်ချောင်မနေနဲ့ဆရာကြီး 77 ။ ပြောင်းစေချင်လျှင် ရှင် အိမ်ဝယ်ပေးလိုက်လေ ။
အန်တီစုကလည်း ပြောပါတယ်… မပြောင်းရေးချ မပြောင်းပါတဲ့ … ။
၀ယ်ပေးချင်ပါတယ် အီးဒုံးရယ်။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်က ပုံမှာပါတဲ့ ကားတောင်မစီးနိုင်လို့အလုပ်ကို
ဆရာကြီး 77က အာရွီးကောင်းသလို အဖြီးကလည်း တော်တာပဲ …ပထမပုံက ရှင်ကားထဲက ရိုက်တဲ့ ပုံလေ … ။ ကားရော ငှားစီးတယ်လို့ ပြောဦးမလို့လား ။ ယုတ္တိရှိအောင်ပြောပါ ။
ပြောတော့ သာမန်ပြည်သူတယောက်လို့ သဘောထားသတဲ့ …..
ကြောက်လိုက်တာကလဲ ဒူးကိုတုန်လို့ …..
ဒီလောက်စိုးရိမ်မှဖြင့် အဲသည်သာမန်ပြည်သူကို နေပြည်တော်ခေါ်ထားပါတော့လား….။
သဂျီး နယူးယောက်ကို ပြောင်းလာပေးပါ။ ဦးခိုင်ကို လေးစားလွန်းလို့ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပါရစေ၊ ဒါမှ မန်းဂေဇက်အွန်လိုင်း နေ့တိုင်းတက်နေရတဲ့ ဒုက္ခကနေ လွတ်မှာ။ ရွာသားအကျိုးကို တကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင် ဒါလေးတခုတော့ လိုက်လျောသင့်ပါတယ်။
အမှန်က အန်တီစုကို အိမ်မပြောင်းခိုင်းသင့်ဘူး ပိတ်ထားတဲ့ လမ်းကိုသာပြန်ဖွင့်ခိုင်းသင့်တာ
အခု nigimi77 ပြောသလို ပြည်သူတွေ ဒုက္ခကို ဒီတိုင်းကြည့်မနေနဲ့ဆိုပြီး သတင်းစာထဲကနေ ပြည့်သူ့အော်သံမှာ သွားပြောပါလား ……
မိုက်လိုက်တဲ့ နွယ်ပင်လေး။ အရိပ်ပြလို့အကောင်လဲ မမြင်ပါလားကွယ်…။
နွယ်ပင် ပြောတာမှန်တယ်ဗျ အစ်ကို 77 ရ
အလို သတင်းစာကနေ ပြောသင်.ပါတယ်။
ဘယ်တုန်းကများ ပြည်သူ့အကျိုးကို ဦးစားပေးခဲ့လို့လဲဗျာ… ဒီလမ်းကို ပိတ်လိုက်ရင် ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်မလဲ ဆိုတာ သိသိရက်နဲ့ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြတာပဲလေ… သွားပြောမနေနဲ့ သူတို့ဆီမှာ သနားကြင်နာမှု၊ စာနာနားလည်မှုဆိုတာ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး…
မှန်လျှက်သားနဲ့ မပြောရဲတဲ့ သူစာရင်းမှာ ကျွန်တော့်ကိုထဲ့ထားပေးပါ။
ဘာလို့တစ်ဖက်ထဲအမြင်တွေနဲ့ ကြည့်နေကြတာလဲ… လောကကြီးမှာ ဒီလိုအမြင်ကျဉ်းတဲ့သူတွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့ မမြင်ဖူးလား………….. ဘယ်သူတွေကြောင့် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ရှိတဲ့သူမပြောနဲ့ လူပိန်း၊ ခုမှ မွေးတဲ့ကလေးတောင် သိတယ်………….
ဒါက ဒီလိုရှိတယ် မနောဖြူရဲ့ ။
ပြောလို့ ရတဲ့ ကိစ္စတွေရှိတယ်။ မရတဲ့ ကိစ္စတွေ ရှိတယ်။
ဒါဟာလဲ ထွေထွေထူးထူး ရှင်းပြနေစရာမလိုတာ ခင်ဗျား တစ်သက်ရှိလောက်ပြီ။
Think Tank ဆိုတာနဲ့ ပတ်သပ်လို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
ဒီနေရာမှာ Concept ဆိုတာ လိုပြန်ရော။
ကျုပ်ဘာကို ပြောချင်တယ် ဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အသိဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပြင်ကို Concept ရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည်တဲ့ လူတွေလည်း သိလိမ့်မယ်။
ကဲကဲ …ကလေးတွေ သိပ်မဆူကြနဲ့…. လူကြီးတွေ အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးတွေ ပြောနေတယ်။
ခုမှ မွေးတဲ့ကလေးတောင်သိတယ်ဆိုတာက နည်းနည်းပိုသွားပြီ … အင်းလေ ကလေးလည်းသိမှာပေါ့ … နို့ စို့ ဖို့လေ ။
ဒါဆိုရင် ဘယ်သူတွေက မှားနေလဲ ဘယ်သူတွေက ပြင်သင့်သလဲ… အားလုံးအတွက် အားလုံးအတွက်ဆိုပြီး ဘယ်သူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ….. ဒါကတော့ ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင် ပိုပြီး သိပါလိမ့်မယ်ရှင်။
ကို 77 ကလည်း တော်တော်ပိန်းတာပဲ။သေချာစဉ်းစားပြီးမှပြောပါ။ ခင်ဗျာမှာဘာအရည်အချင်းရှိလို့ခုလိုလာအော်နေတာလဲး။ ဒီလမ်းကိုပိတ်တာဘယ်သူတွေလဲး။ ပြည်သူပြည်သားတွေအနေအစားဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာဘယ်သူလဲးဆိုတာ တစ်ကဘာလုံးကသိတယ်။ ခင်ဗျာတစ်ယောက်ပဲမသိတာ။ တော်တော်ပိန်းတာပဲ။
ပိန်းတယ်လို့ ပဲ သဘောထားလိုက်ပါတယ် ငါ့ရှင်ရယ်။
အဘတို့ က အသက်ကြီးပြီကွဲ့ ……အဟွတ်…အဟွတ်…
ဟုတ်ပ ငါ့ရှင်…။ ငါ့ရှင်ပြောသလိုပါပဲ…တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ငါ့ရှင်တို့ လို လူငယ်တွေက ပိုသိကြပါတယ်။
သို့ သော်လည်း သိသိကြီးနဲ့ဘာမှ မလုပ်တဲ့ ငါ့ရှင်တို့ လို ကလေးတွေထက်စာရင်
အဘတို့သက်ကြားအိုတွေက ခပ်ပိန်းပိန်းနဲ့ ပဲ ပါးပါးလေးပုတ်ကြည့်တာပါ …။
နောက်တခါ ပုံတင်ရင် ကားနံပါတ် ပါအောင် ရိုက်ပြီး တင်ပါ။
လောလောဆယ် အတွယ်သုံးယောက်ထက် ပို တင် ထားတယ်။ ချလန် ဖြတ်ရမယ်။
77 ရေ အရိပ်ပြလို့ အကောင်မမြင်ကြတဲ့သူတွေ ရှိပေမယ့်
တချို့ကျတော့ အကောင်မြင်တဲ့ အပြင် အထီး ၊ အမ ပါခွဲ ပြနိုင်တဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။
စကားပြောတဲ့အခါ … စာရေးတဲ့ အခါ …. ရိုးရိုး ဒဲ့ကြီး ပြောတာလဲရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကျုပ်လို တောသားမျိုးပြောရင်ပေါ့ ..
ငယ်ငယ်ကျောင်းမှာသင်ရတုန်းကတော့ ဖွင့်ဆိုရှင်းပြရေးနည်းဆိုလား …
အကျိုးကိုဖေါ်ပြီးမှ အကြောင်းကို ဖတ်သူကိုရှာခိုင်းတာမျိုး ….
ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးကိုဖေါ်ပြီးမှ အမှန်အကြောင်းကို “ရှာကြည့်ပေတော့ဟေ့” လို့ လက်ညှိုးထိုးပြတာမျိုး…
လက်ဆွဲပြီး ခေါ်ပြ ၊ လက်ဝါးထဲထည့်ပြ ၊ စေ့စေ့ကြည့်ပြီး ခေါင်းဆတ်ပြ တာမျိုး …
အကောင်းပြောသလိုနဲ့ ဆဲ တာမျိုး….
ဆဲ သလိုနဲ့ အကောင်းပြောတာမျိုး…
စသည်စသည်ဖြင့် …စာပရိယာယ် ၊ စကားပရိယာယ် တွေလဲရှိကြောင်း…
ဘုန်းကြီးကျောင်းနေတုန်းက ကြားခဲ့ဘူးတယ် …။
ကို 77ဖြီးမယ်ဆိုရင် အ၇င်ဆုံးအီးတုံးရှိမရှိအရင်ကြည့်နော် ကြည့်ကြပ်ပြီးဖြီးပေါ့လေ
ရဲအရာရှိ။ ။ ခင်ဗျားဆိုင် အခိုးခံရပြန်ပြီ။ မပေါ့ဆနဲ့လေဗျာ ။
ဆိုင်ရှင် ။ ။ ဟေ့လူ ၊ သူခိုးအခိုးခံရလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့အထဲ ။ ခင်ဗျား အပြစ်ပြောချင်ရင် သူခိုးသွားပြောပါလား။
ရဲအရာရှိ ။ ။ ဟာ ….သူက သူခိုးလေဗျာ ။ ပြောနေစရာလား ။
ဟေ့ကောင် nigimi77 , ဒီလောက်တောင် ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ကောင်ပဲ ….
ဒီလို ရိုးရိုးလေးတောင် မတွေးတတ်ဘူးလား …
မင်းကြည့်ရတာ ထမင်းစားပြီးကြီးလာတာမဟုတ်ဘူး …
မင်းခေါင်းကို ဓာတ်မှန်မရိုက်ကြည့်နဲ့ … မစင်တွေပဲရှိမှာ…
တော်တော် သနားစရာ သတ္တ၀ါပဲ…..။
ပိတ်တဲ့လူတွေကလဲ ပိတ်ထားတာတော်တော်ကြာပါဘီ နေတဲ့လူက လဲ ပေပြီး နေနေတာတော်တော်ကြာပါဘီ တူတူပါပဲ